ဖမ်းခေါ်သွားကတည်းက ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိအောင် စုံစမ်းရခက်နေတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို ရှိတဲ့နေရာကိုသိရလို့ ပရိတ်သတ်ကို အသိပေးလာတဲ့ HUGO.. – Sport Gaber
ပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၁)ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေေ ကြာင့် ပြည်သူတွေနဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှ င်မောင်နှမတွေ က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပြည်သူေ တွနဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အနုပညာရှ င်တွေထဲမှာ ပိုပိုကလည်း လ မ်းမပေါ်ထွက်ကာ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရမယ့် သူတွေ ထဲတွင် ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် သူမရဲ့အိမ်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံလိုက်ရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့သူ ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် Hu Go က “မပို အင်းစိန်ထောင် ရောက်ပြီလို့မိသားစုထံမှသိရကျန်းမာပါစေအမ ”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင်တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ကျန်းမာရေးမခြေ အနေတော့ မသိရသေးဘူး! သိရရင်ပြန် မျှဝေပေးပါ့မယ်!
But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောင်းတယ်! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီဒဏ်ကို အသာလေးကျော် လွှားနိုင်မှာပါ!သူအ တွက်လဲ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး”လို့ သူရဲ့ပို့စ်အောက်တွင် ပရိသတ်တွေသိအောင် ထပ်ပြီးရေးသား မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပြီး
ပိုပိုရဲ့ ပရိသတ်ေ တွကလည်း ကျန်းမာရေးေ ကာင်းမွန်ပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
source;Hu Go FB Page